‘व्यवसायीको पहरेदार हुन चाहान्छु’
प्रकाशित मितिः जेठ 27, 2076
585 पटक पढिएको
प्रभाव खतिवडा, नाम जस्तै उनको धरानमा काम पनि छ । उनले धरानको व्यवसायमा राम्रै प्रभाव जमाएका छन् । एकपछि अर्काे व्यवसायमा लागेका खतिवडा अहिले ५ वटा फर्मका सञ्चालक हुन् । विजयपुर हस्पिटल, विजयपुर ट्रेडर्स (यामाहा शो रुम) एसटी कन्ट्रक्सन, विजयपुर सप्लायर्स (औषधीको थोक विक्रेता) र विजयपुर टेक्निकल कलेज उनका व्यवसायीक फर्म हुन् । धरानमा हस्पिटल चल्दै चल्दैन, अझ आवश्यक नै छैन भन्ने आम बुझाइ हुँदा हुँदै उनले हस्पिटल खोलेर सफल भएपछि उनको व्यवसायिक उचाइले एकैपटक उडान लिएको हो । उनी धरानका उदयीमा युवा व्यवसायी हुन् । उनको अध्ययन पनि राम्रो छ । उनले पब्लिक मावि फुस्रेबाट एसएलसी पास गरी हात्तिसारमा आइएस्सी पढेका हुन् । त्यसपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानबाट बिबिएस गरेका उनले इण्डिया मधुराइज युनिभर्सिटिबाट हस्पिटल व्यवस्थापनमा मास्टर्स गरेका हुन् । युवा उमेरमा नै व्यवसायमा सफलहुँदै गएका उनी आसन्न सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा उद्योग तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनी खतिवडासँग औजार दैनिकले गरेको कुराकानीको अंशः
सुनसरी उवा संघमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ चुनाव तयारी कस्तो छ ?
चुनाव तयारी राम्रै छ । प्रतिष्पर्धा हो, चुनाव हो जित्नै पर्ने हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी साथीहरु भए ठाउँमा पुगिरहेको छु । आफ्नो कुरा राखिरहेको छु । भेटघाट छलफलमा छु ।
उवा संघमा गएर के–के काम गर्ने योजना छ ?
उद्योग वाणिज्य संघ भनेको व्यपारीहरुको संस्था हो । यहाँ गएर व्यापारीहरुकै हितमा काम गर्ने योजना छ । विशेष गरी व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्नमा सहज वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने, उद्यागीहरुलाई सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न मेरो प्रयत्न हुनेछ । उद्योगी व्यवसायी साथीहरुलाई आइपर्ने विभिन्न प्रशासनिक झण्झट, करको झण्झटलाई सहज बनाउनुपर्छ अवारनेश कार्यक्रम गर्नुपर्छ, त्यस्तै सरकारले दिने विभिन्न सुविधाहरुका बारेमा जानकारी नहुँदा त्यसबाट बञ्चित हुनुपरिरहेको छ यसतर्फ म सक्रियता पूर्वक लाग्छु । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो व्यापारीको संस्था हो भन्ने भावना जगाउन जरुरी छ । यस तर्फ पनि म सक्रिय रहनेछु । विशेष गरी यो संस्था धरानको मात्र नभइ सम्पूर्ण सुनसरीको हो । यसलाई विस्तार गर्न पनि आवश्यक छ । यस तर्फ पनि म सक्रिय हुनेछु । त्यसै गरी धरानको व्यवसाय जुन रुपले अगाडी बढ्नुपर्ने हो त्यो रुपले अगाडी बढिरहेको छैन यसतर्फ पनि म काम गर्छु । विराटनगर–इटहरी करिडोरमा ठूला उद्योगहरु छन् । तीनको पनि उचित प्रबद्र्धन हुन सकिरहेको छैन, त्यसता पनि योजना बनाउनु छ । अर्काे कुरा धरानमा रात्रिकालिन बजार सुरु गर्न पनि म सक्रियतापूर्वक लाग्छु ।
तपाई युवा हुनुहुन्छ, तपाईलाई पत्याउलान् त उद्यागी व्यापारीले ?
हो म युवा छु, म सँग काम गर्ने जोश जागर छ । त्यति मात्र होइन म उमेरले युवा भएपनि अनुभवले म पाकिसकेको छु । २० वर्षको हुँदादेखि म व्यसायमा लागेको हँु । त्यतीबेला म विजयपुर पोलिक्लिनिक चलाउँथे । यो विचमा १५ वर्षको भन्दा बढी भयो म व्यवसायमा लागेको । फेरी युवा भन्दैमा गर्दै गर्दैन भन्ने पनि होइन नी त । युवामा त जोश जागर हुन्छ, खट्न सक्छ, आफ्ना कुराहरु दमदार ढंगले राख्न सक्छ । त्यसैले म युवालाई कमजोर मान्दिन । टिममा युवा जोश र म्याचोडहरुको अनुभव मिक्स भयो भने प्रभावकारी रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
तपाईको त फर्महरु धेरै छन्, समय दिन सक्नुहुन्छ त संघलाई ?
फर्म धेरै हुने वित्तिकै फुर्सद नै हुँदैन भन्ने होइन । अहिले पनि ४ वटा फर्महरु मेरो व्यवस्थापनमा चलिरहेका छन् । यी सबैलाई म समय व्यवस्थापन गरेर चलाइरहेको छु । यति मात्र होइन अरु पनि थप्नुपर्छ व्यवसाय । मुख्य कुरा समय व्यवस्थापन हो । समय व्यवस्थापन गर्न सकियो भने प्रसस्त काम गर्न सक्ने गरी समय निकाल्न सकिन्छ । मलाई यो कुराको विश्वास छ ।
अहिलेसम्म धरानलाई के योगदान दिनुभयो ?
अत्यन्तै धेरै मेरो मात्रै योगदान छ भन्ने होइन । मैले मेरो तर्फबाट सकेको योगदान धरानका लागी दिएकै छु । धरानमा विपि प्रतिष्ठान भएपनि सहज उपचार सेवा नहुँदा धराने जनताहरु विराटनगर, काठमाडौ जानुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसलाई मैले हस्पिटल खोलेपछि धेरै सहज भएको छ । विपिमा धेरै समय लाग्ने र धेरै झण्झट हुने हुँदा दिकदार भएकाहरुलाई धरानमा नै विजयपुर हस्पिटल खोलेपछि धेरै सहज भएको छ । म समाज सेवामा रुचि भएको मान्छे विभिन्न समयमा सामाजिक काममा पनि संलग्न हुन्छु । चाडै नै टेक्निकल कलेज खोल्ने प्रकृयामा छौ । त्यसबाट पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । भलै त्यो व्यवसाय होला तर सेवा पनि हो ।
तपाईका साथीहरु विदेशमा पुगे अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप गए तपाई किन जानु भएन ?
हो, म पनि विदेश जान सक्थे र मेरा धेरै साथीहरु विदेशमा छन् । रेमिट्यान्सले यो देशको अर्थतन्त्र धान्न ठूलो सहयोग गरेको छ । म यसलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्दिन पनि । तर मलाई चाही विदेश भन्दा स्वदेश नै प्यारो भयो । मैले देशमा नै मेरो भविष्य पनि देखे । इमान्दार भएर व्यवसायमा लागिरहने हो भने हामीलाई बाँच्नै नसक्ने स्थिति छैन । स्वदेशमा नै व्यवसाय गरेर पनि रामै्र जीवनशैलीमा बाच्न सकिने विश्वासले नै म स्वदेशमा बसेको हुँ ।
तपाईका हरेक फर्ममा विजयपुर जोड्नुको कारण ?
मेरो जन्म विजयपुरमा भएको हो । विजयपुर भनेपछि मेरो मातृभूमिको नाम जोडिन्छ र मैले मेरा फर्महरुमा विजयपुर जोडेपछि मैले कहिल्यै बिर्सन सक्ने सम्भावना भएन । त्यहि भएर विजयपुर नाम राखेको हुँ । त्यति मात्र नभइ विजयपुर भनेको ऐतिहासिक नाम हो । यसको इतिहास गर्विलो छ । यसलाई पनि बचाइराख्नु प¥यो नि आफुले सकेजति त्यहि भएर हो ।
म सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी साथीहरुसँग के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने उवा संघमा हामीले पठाउने उम्मेदवारले कम्तिमा हाम्रा पक्षमा काम गर्न सक्ने क्षमता राखोस् । हामिले दिएको भोट खेर नजाओस् । व्यर्थ दिएछु भन्ने समय आउनु भन्दा अघि नै विचार पु¥याऔ । त्यहि भएर काम गर्नसक्नेलाई भोट गर्नुहोस् । म व्यक्तिगत रुपमा भन्दा मलाई भोट दिने साथीहरुलाई व्यर्थ दिएछु भन्ने अवसर दिन्न । तपाईको भोटको सदुपयोग हुनेमा म विश्वस्त पार्न चाहान्छु ।